Bruno Fernandes Oo Afka Furtay Kadib Rikoodhadii Uu Ka Khasaariyay Kooxdiisa – Kooxda.com
HomePremier LeagueBruno Fernandes Oo Afka Furtay Kadib Rikoodhadii Uu Ka Khasaariyay Kooxdiisa
Bruno Fernandes Oo Afka Furtay Kadib Rikoodhadii Uu Ka Khasaariyay Kooxdiisa
Bruno Fernandes ayaa wacad ku maray inuu ‘soo laaban doono isagoo ka xoog badan sidii hore kadib markii uu khasaariyay rikoodhe kulankii ay Man United guuldarada kala kulantay Aston Villa Premier League.
Xiddiga reer Portugal ayaa khasaariyay rikoodhe uu kooxda Man United hal dhibic ugu badbaadin lahaa kadib markii ay Aston Villa dhalisay goolka 1-aad daqiiqadihii ugu dambeeyay.
Kadib khasaarinta rikoodhada xiddiga Man United ayaa la kulantay guuldaradii ugu horaysay horyaalka premier League xilli ciyaareedkan.
“Ma jiro qof aniga iga niyad jabsan kadib markii aan khasaariyay rikoodhada taas oo sababtay guuldarada”ayuu Fernandes u sheegay 5.8 milyan oo taageerayaashiisa ah Instagram -ka.
“Waxaan mar walba qaatay mas’uuliyadeyda mar walbana waxaan ku shaqeeyay cadaadiska marar badan laakiin maanta waan fashilmay laakiin waxa aan horay u wajahay caqabadan oo kale waxana aan diyaar u ah in aan masuuliyada dusha saarto”.
“Maanta waxa aan mar kale qaatay masuuliyada aan qaadan jiray tan ilaa markii aan ku soo biiray United mar kalena waan qaadan doonaa aniga oo aan wax cabsi ah dareemin”.
“Waxa iigu muhiimsan aniga ayaa ah inaan wada guuleysanno mar walbana waxaan sameyn doonaa wax walba oo aan awoodo si aan u caawiyo saaxiibbadayda kooxda iyo kooxda inay noqdaan kuwa ugu fiican ee aan noqon karno”.
“Waxaan ku soo laaban doonaa aniga oo ka xoog badan sidii hore, maxaa yeelay waa waxa aan u sheegay naftayda iyo dhamaan taageerayaasha kooxda iyo xiddigaha aan isku kooxda nahay”.
Antonio Rudiger Oo Go’aan Kama Dambays Ah Ka Gaadhay Mustaqbalkiisa Chelsea